Nyefee Data si Acer ka iOS Devices
Ịmafe si gị ochie na ekwentị mkpanaaka a ọhụrụ onwunwu smartphone na-ada ka ihe na-akpali akpali echiche. Na obi ụtọ nke na-akpụ akpụ a ngwaọrụ ọhụrụ nwekwara daunts na echiche nke na-ebufe oke data na e chịkọbara na gị ochie ekwentị karịrị oge. Ọ bụ buturu mfe agafeta data mgbe ị na-eme atụmatụ ịgbanwee n'etiti ngwaọrụ na-arụ ọrụ na otu n'elu ikpo okwu. Otú ọ dị, ọ bụ trickier bugharịa data mgbe nyiwe dị iche iche.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ka ịgbanwee si gị Acer ekwentị na iOS ngwaọrụ, ị nwere ike na-eso otu n'ime ọtụtụ dị ụzọ gasị agafeta data. Ma na-enweghị nri ngwá ọrụ na ezi obibia, i nwere ike na-eche ihu ole na ole hiccups n'oge data transfer usoro.
The isi mbipụta na ị nwere ike ịbịara ka na-enyefe data gị Acer ọ bụla iOS ngwaọrụ na iji ochie ụzọ bụ:
• Usoro nke na-ebufe data site na-eme gị PC dị ka a mgbere bụ na-ewe oge na ruthlessly-agwụ ike.
• Ị na-achọrọ-anata grueling ọrụ nke ejikọta na isi na-aga ngwaọrụ gị PC n'otu otu mgbe.
• The usoro ochie adịghị ekwe ka ị nyefee ihe data echekwara na esịtidem ebe nchekwa nke ngwaọrụ gị dị ka ozi ederede na kọntaktị.
• Iji nyefee ihe kọntaktị, nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa components gị data collection, na-achọrọ na-eso a dị iche iche, kama ogologo ụzọ, ụzọ kpam kpam.
• N'ihi na dị iche iche sistem ngwaọrụ gị, i nwere ike na-eche ihu ndakọrịta nke mgbe agbali nyefee foto, e-akwụkwọ, na ndị ọzọ na mgbasa ozi faịlụ.
Iji zere (ma ọ bụ n'ụzọ dị ịrịba ama belata) n'elu tụlere nsogbu na i nwere ike na-eche ihu mgbe na-ebufe data, ị nwere ike ibudata otu oru oma-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Isiokwu a aims ịme ka ị a magburu software ngwa n'ihi na-ebufe gị data n'etiti abụọ smartphones, n'agbanyeghị nke n'elu ikpo okwu, na mfe, enem n'ụzọ.
Nyefee Data si Acer ka iOS Ngwaọrụ na Otu-pịa
Iji mee ka ọrụ nke na-ebufe oke data si gị ochie ngwaọrụ a nwa play, i nwere ike iri ebe mgbaba nke otu oru oma na otutu software aha ya bụ MobileTrans ẹkenam site Wondershare. Wondershare MobileTrans Bụ otu n'ime ọtụtụ mobile software utilities si Wondershare (otu n'ime ndị kasị ibu Mmepe nke ọgwa n'ji software ngwaahịa).
MobileTrans 'Sleek na a haziri nke ọma interface-enye gị ohere ịhụ gị ejikọrọ smartphones ezigbo oge na ihuenyo, na-ejegharị gị site niile ndị dị mkpa iji nyefee gị data. Ngwa bụ onye ọrụ-enyi na enyi na ọ dịghị nwere a nkpoda mmụta usoro.
Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee data si gị Acer ka iOS ngwaọrụ, Wondershare MobileTrans bụ na-atụ aro ihe ngwọta maka gị. The nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka nke na-eji Wondershare MobileTrans na-nyere n'okpuru na ị ga-eso na mezue data transfer usoro.
Wondershare MobilTrans-enyere gị aka nyefee ọdịnaya n'etiti smartphones na arụ ọrụ na gam, iOS, WinPhone ma ọ bụ Symbian nyiwe ke otu click. Na nkwado ihe karịrị 3000 ekwentị ụdị, ị nwere ike mfe nyefee ederede ozi, kọntaktị, ngwa, media faịlụ na foto na iji MobileTrans.
Nzọụkwụ 01: Download Wondershare MobileTrans na PC gị.
1.Download ziri ezi version nke Wondershare MobileTrans dị ka kwa sistemụ arụnyere na gị na PC:
Nzọụkwụ 02: Wụnye na ẹkedori ebudatara software.
1. Ozugbo ebudatara, abụọ-pịa executable faịlụ nke ngwa si na desktọọpụ.
2. Soro na ihuenyo ntuziaka ka mezue echichi usoro.
3. Mgbe MobileTrans na-ọma arụnyere na PC gị na, pịa Malite Ugbu a bọtịnụ na meghere window ẹkedori software.
Nzọụkwụ 03: Jikọọ ma ndị ngwaọrụ gị PC.
1. Ozugbo ngwa na ulo oru na interface-egosi, pịa Malite bọtịnụ na ala nke na ekwentị ekwentị transfer ngalaba.
2. Iji nwoke USB cables, jikọọ smartphones gị PC.
3. Iji hụ na ngwaọrụ na-mata site na usoro ihe omume, anya maka green ejikọrọ bọtịnụ n'okpuru ma ndị smartphone aịkọn na interface.
4. Ọzọkwa jide n'aka na Acer na iOS ngwaọrụ na-egosipụta n'okpuru Isi Iyi na Destination ngalaba karị.
Rịba ama: Ọ bụrụ na smartphones na-adịghị egosipụta na ihe kwesịrị ekwesị na ngalaba, pịa tụgharịa button si n'etiti abụọ ngalaba na-edebe ha n'ụzọ ziri ezi.
Nzọụkwụ 04: Nyefee data si Acer ka iOS ngwaọrụ.
1. Mgbe kpaliri iji wụnye iTunes na PC gị na, ọ bụrụ na ị na-adịghị iTunes arụnyere ugbua na PC gị na, mezue nwụnye usoro site na-esonụ na ihuenyo ntuziaka.
Rịba ama: Ọ bụrụ na i nwere iTunes arụnyere na gị na PC, ị nwere ike ileghara ncheta.
2. Optionally, ego na Doro Anya data tupu oyiri checkbox n'okpuru Destination ngalaba, na bụrụ na ị chọrọ ihichapu ọ bụla na mbụ echekwara data gị iOS ngwaọrụ.
3. Site transferrable data ụdị depụtara na Họrọ ọdịnaya idetuo igbe n'etiti Isi Iyi na Destination ngalaba, lelee na checkboxes na-anọchi anya data na ị chọrọ nyefee.
4. N'ikpeazụ pịa Malite idetuo button n'okpuru Họrọ ọdịnaya idetuo igbe na-amalite nyefe usoro.
5. Chere ruo mgbe Wondershare MobileTrans Nyefe họrọ faịlụ gị iOS ngwaọrụ.
Rịba ama: Ị nwere ike ịkwụsịtụ transfer usoro mgbe ọ bụla mgbe site na ịpị Kagbuo button na ala-nri akuku nke transfer window.
6. Ozugbo gị niile faịlụ ndị ahọrọ na-agafere ka iOS ngwaọrụ, pịa OK bọtịnụ si popup igbe.
Wondershare MobileTrans Bụ kemfe omume na awade àgwà ọrụ ndị chọrọ nyefee data n'etiti ha smartphones. The software akpata ndị kasị elu ọrụ Fim n'etiti ya dị iche iche asọmpi ruru ka sleek, magburu, ọrụ na onye-enyi na enyi, na mfe na-eji atụmatụ.
> Resource> iOS> otú nyefee Data si Acer ka iOS Devices